Home Wararka Maxaa ka soo baxay kulanka Wasiirka Batroolka iyo Xeer Ilaaliyaha?
Kulanka waxaa la filayay inuu dhaco 25kii Abriil 2022ka. Xeer Ilaalintu ma soo saarin war saxaafadeed ku saabsan qabsoomidda ama qabsoomid la’aanta kulanka.
Shaki badan baa jira ah in Wasiirka Batroolku dhegaha ka fureystay u yeerista kaga timid xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka. Waxaa kale oo jira tuhun ah in Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble codsaday in waraysiga Wasiirka dib loo dhigo si dowladda cusub ee imanaysa ay ula wareegto galka baarista heshiiska sharci-darrada ah oo Ra’iisal Wasaaruhu ku gacan-sayray laakiin u oggolaaday Wasiirka inuu shaqadiisa sii wato.
Wasiirka Batroolka Cabdirashiid Maxamed oo Safiirka Maraykanka u jooga Soomaaliya uga xogwarramaya heshiiska sharci-darrada uu saxiixay Ra’iisal Wasaare Rooble oo aan ogeyn.
Sharciga maamulka dowladda ayaa dhigaya in shaqada laga joojiyo mas’uulka xilkasnimo-darro lagu helo ka hor inta aan baaritaan rasmi ah lagu samaynin qofka xilka haya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa buriyay heshiiska sharci-darrada ah oo uu Wasiirka Batroolku sida qarsoodiga ah u galay isagoo og wareegto madaxtooyo oo reebaysay gelista heshiisyo xilliga kala-guurka.
Warqaddii uu Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranku ugu yeeray Wasiirka Batroolka.
Previous article(Daawo) Maareeye uu xilka ka qaaday Rooble oo ku gacan sayray, shaaciyeyna sabab yaab leh oo ay isku hayaan
Next articleSoomaaliya iyo Caalamka oo maanta si weyn looga ciiday
MW. Farmaajo oo ku wajahan Imaaraadka, xiriirka Qatar iyo Turkiga oo...